တရုတ်မှ ဆုနှစ်ဆုကို FBSကထပ်မံရရှိခဲ့ပြန်ပါပြီ!
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်နှစ်ခုကို ရရှိခဲ့သည့် သတင်းကောင်းကို - FBSအဖွဲ့သားများမှ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ ဝေမျှပေးလိုပါသည်. ယခုအကြိမ်တွင်ရရှိခဲ့သည့်ဆုများမှာ Hexunမှ ချီးမြှင့်သည့် "အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပညာပေးသင်ကြားရေး ၂၀၁၇" ဆုနှင့် တရုတ် Forex Analysis ပြပွဲ နှင့် Y2 ဖိုရမ်မှ ချီးမြှင့်သည့် ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် "အကောင်းဆုံး FX IBပရိုဂရမ်ဆု"တို့ ဖြစ်ကြပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့အား အကောင်းဆုံးဘရုတ်ကာများကိုသာ နှစ်စဉ်ရွေးချယ်ပေးအပ်နေသည့် ဆုတံဆိပ်များဖြစ်ပါသည်. ထိုဆုများရရှိရန် ယုံကြည်စွာကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့သည့် တရုတ် Forex Analysis ပြပွဲ နှင့် Y ဖိုရမ်မှ အဖွဲ့သားများအားလုံးအား လွန်စွာမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်အောင် ဆက်လက် ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်.